राजपा र समाजवादी एकीकरण, छलफल सुस्त, नेतृत्व र वरीयता विवाद यथावत् : RajdhaniDaily.com -
Home Editor-Picks राजपा र समाजवादी एकीकरण, छलफल सुस्त, नेतृत्व र वरीयता विवाद यथावत्
काठमाडौं । एकले अर्काको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र समाजवादी पार्टीबीचको एकीकरण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ । दुई पार्टीबीच छलफल हुँदै आए पनि पछिल्ला दिनमा छलफल भएको छैन ।
एकले अर्कालाई दोष लगाइएका कारण पनि पार्टी एकता हुन नसकेको हो । त्यस्तै, दुई पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच नेतृत्व र वरीयता क्रमको विवादका कारण पनि एकीकरणमा अन्योल देखिएको हो ।
समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दुई पार्टीबीच एकीकरणका लागि छलफल भए पनि टुंगो लाग्न नसकेको बताए । राजपाभित्रै सहमति हुन नसक्दा एकीकरण टुंगो लाग्नमा समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।
‘राजपाभित्र ६ जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरूबीचमै सहमति हुन नसक्दा एकीकरण टुंगो लाग्न सकिरहेको छैन,’ यादवले भने, ‘उहाँहरूमा सहमति जुटे एकीकरण पनि छिट्टै हुन्थ्यो ।’
दुई पार्टीबीच एकीकरणका लागि विगतमा धेरै छलफल भए पनि अहिले छलफल सुस्ताएको छ । राजपा अध्यक्षमण्डलका पूर्वसंयोजक राजेन्द्र महतोले समानताका आधारमा एकता हुने विषयमा समाजवादीको असहमति रहेको बताए । दुवै पार्टी समान हैसियतका भएकाले समानताको आधारमा एकीकरण प्रक्रिया टुंगो लाग्ने उनले बताए ।
‘दुवै पार्टीको समान हैसियत भएकाले समानताका आधारमा एकीकरण टुंगो लगाउनेमा समाजवादीको सहमति छैन, यसमा समाजवादी सहमत भएलगत्तै एकीकरण घोषणा हुन्छ,’ महतोले भने, ‘जनताकै चाहनाअनुसार हामी एकीकरणका लागि अगाडि बढे पनि केही कुरामा अझै सहमति भएको छैन ।’
अधिकांश विषय टुंगो लागिसकेको बताउँदै उनले केही प्राविधिक विषयमा मात्रै टुंगो लगाउन बाँकी रहेको बताए । समाजवादीभित्रको आन्तरिक सहमतिसँगै एकीकरण घोषणा भव्य रूपमा गरिने महतोले बताए । राजपाका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजकसमेत रहेका महतोले सबैले आफ्नो हठ त्याग्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष एवं वार्ता टोलीका संयोजक राजेन्द्र श्रेष्ठले दुई पार्टीबीच एकीकरण गर्न छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसकेको बताए । मुख्यतः राजपाभित्रैको आन्तरिक समस्याले सहमति हुन नसकेको बुझाइ श्रेष्ठको छ । समाजवादी पार्टी अध्यक्ष यादव जस्तै श्रेष्ठ पनि एकीकरण हुन नसक्नुको कारण राजपाभित्र आन्तरिक सहमति नहुनुलाई मान्छन् ।
राजपा महासचिव केशव झाले दुई पार्टीबीच छिट्टै एकीकरण हुने बताए । दुई पार्टीबीच विगतमा गम्भीर छलफल भए पनि अहिले सुस्त भएको उनको भनाइ छ ।
समाजवादी पार्टीका महासचिव रामसहाय यादवले अहिले एकीकरण विषयमा केही पनि छलफल नभएको बताए । उनले राजपासँग एकीकरणका लागि समाजवादी सकारात्मक रहेको बताए ।
यस्तो छ राजपा र समाजवादीको एकीकरणका लागि तीन प्रस्ताव
पछिल्लो समय राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टी बीचमा भएको छलफलमा तीन नयाँ प्रस्ताव आएको छ । नेतृत्वको व्यवस्थापन सम्बन्धमा आएको तीन प्रस्तावमध्ये एउटा समाजवादीको र दुई राजपाका छन् । तर, एकले अर्काेका प्रस्ताव स्वीकार गर्न सकेका छैनन् ।
समाजवादीको प्रस्ताव (रोलक्रम)
अनिल झा र राजकिशोर यादव
राजपाको पहिलो प्रस्ताव
महन्थ ठाकुर (मधेसी)
डा. बाबुराम भट्टराई (खस आर्य)
अशोक राई (जनजाति)
महन्थ ठाकुर, डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो सहभागी चार सदस्यीय विशेष अध्यक्षमण्डलको कमिटी तथा बाँकी अन्य शीर्ष नेतालाई वरिष्ठ नेताका रूपमा राख्ने ।
राजपाको दोस्रो प्रस्ताव
महन्थ र बाबुराम साझा नेता
राजपा र समाजवादीका तीनै प्रस्तावको साझा निष्कर्ष दुवै पार्टीले दुई नेतालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । महन्थ ठाकुर र डा. बाबुराम भट्टराईलाई दुवै पार्टीका नेताले स्वीकार गरेको देखिन्छ ।
तीनवटै प्रस्तावमा राजपा पूर्वसंयोजक ठाकुर पहिलो नम्बर र समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई दोस्रो नम्बरमा छन् । तर, अन्य नेताको मर्यादाक्रम तलमाथि भएको देखिन्छ । अन्य नेतालाई एकले अर्कोलाई स्वीकार नगरेको प्रस्तावमा देखिन्छ । मुख्यतः नेताकै व्यवस्थापनमा समस्या भएकाले एकीकरण प्रक्रिया लम्बिएको हो ।
काठमाडौं । कोरोना संक्रमण देशभर तीव्र रूपमा फैलिएपछि सरकारले १४ जिल्लालाई ‘कोरोना अति प्रभावित’ भनी वर्गीकरण गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार...
काठमाडौँ । अमेरिकाको ओहायो राज्य निवासी गीतकार गोपाल लोहारको शब्दमा रहेको नयाँ म्युजिक भिडियो 'किन मायामा’ सार्वजनिक भएको छ। यस गीतमा स्वर भुटानी भाषी नेपाली...
२४ लाख रुपैंयासहित एअरपोर्टमा पक्राउ परे बस्नेत
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट स्रोत नखुलेको २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहित मोरङ कानेपोखरी गाउँपालिका–७ घर भएका ३३ वर्षीय चुडामणी बस्नेतलाई आइतबार साँझ...
कोरोना त्रास : उच्च सतर्कता अपनाउन ध्यानाकर्षण
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट नेपालीलाई जोगाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा अञ्जना विशुन्खे, अतहरकमाल मुसलमान, एकवल मियाँ,...
ठेलामा बदाम, पानी र मःम बेच्दै धुर्मस सुन्तली
कला Kumar Raut - December 19, 2019 0
भरतपुर । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालालाई सहयोग पु-याउन ठेला पसल सञ्चालनमा ल्याइएको छ । धुर्मुश सुन्तरी फाउण्डेशनले पश्चिम चितवनको रामपुरमा रङ्गशाला बनाउँदै छ ...
सरकारले भन्यो : उपभोग्य वस्तुको अभाव छैन, बढी मूल्य लिए कारवाही भोग्नुपर्ला
Breaking News Dhruba Lamsal - March 9, 2020 0
काठमाडाैं । सरकारले कोरोना त्रासका कारण कुनै पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव नभएको स्पष्ट पार्दै कालोबजारी गरिएको पाइए विद्यमान कानूनअनुसार हदैसम्मको कारवाही गर्ने चेतावनी...
मदिरा सेवन गरी महिलामाथि दुव्यहार गर्ने वडा अध्यक्ष पक्राउ
Breaking News Kumar Raut - July 3, 2020 0
कञ्चनपुर । भीमदत्त नगरपालिका ९ का वडा अध्यक्ष राम नाथ महिलामाथि दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । गए राति वडाध्यक्ष नाथले ब्रह्मदेव बजारमा...
सेयर बजारमा पहिरो, ११७ अंकले घट्यो
काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकले सेयर धितो कर्जाको वर्तमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने भनेपछि सेयर बजार बेस्सरी प्रभावित भएको छ । हाल लगानीकर्ताले सेयर धितोमा ७०...
एक्लो बहादुरी र वीरताले मात्र विकास र समृद्धि हुँदैन :मन्त्री विश्वकर्मा
Not-to-be-missed Prem Shyangtan - February 20, 2020 0
वीरगन्ज । नेपाल सरकारका खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माले एक्लो बहादुरी र वीरताले मात्र विकासको काम र समृद्धि हुन नसक्ने बताएका...
दराजबाट सामान किन्नुस्, सामसुङ एस २० एफई जित्नुहोस्
सूचना प्रविधि Dhruba Lamsal - December 11, 2020 0
काठमाडौं । अनलाइन बजार दराजले वर्षको अन्तिम सेल अभियान दराज १२.१२ को घोषणा गरेको छ । सो अभियान २७ मंसिर मध्यरातदेखि ३ पुस १२...
राजविराजमा अनिश्चितकालिन निषेधाज्ञा जारी
प्रदेश २ Sushila Bishwokarma - July 22, 2020 0
सप्तरी । दैनिक संक्रमित फेला पर्दै गई कोरोना समुदायमा फैलिने सम्भावना बढ्दै गएपछि स्थानिय प्रशासनले राजविराज नगरपालिका क्षेत्रमा बिहीबारदेखि अनिश्चितकालिन निषेधाज्ञा जारि गरेको छ...
काठमाडौंका सडकमा २ हजार आधुनिक बत्ती
Breaking News Dhruba Lamsal - December 11, 2020 0
काठमाडौं । काठमाडौंका मुख्य सडकमा २ हजार आधुनिक बत्ती जडान कार्य अघि बढाइने भएको छ । पहिलो चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि नयाँ बानेश्वर, त्रिपुरेश्वर, कालीमाटी, कलंकीलगायतका...
प्रदेश Roshan Shrestha - April 22, 2020 0
काठमाडौं । पश्चिमी र स्थानीय वायुको प्रभावले विगत केही दिनयतादेखि देशभर बदलीसँगै मेघगर्जन र हावाहुरीसहित वर्षा भइरहेको छ । बङ्गालको खाडीबाट आएको जलवाष्पयुक्त हावा...
सभामुखविरुद्धको द्वन्दकालीन मुद्दा संवैधानिक इजलासमा